Gabaabsi ku yimid macallimiinta maaddooyinka dugsiyada qaarkood - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arday iyo macallin dhex jooga fasal. Sawirle: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX
Gabaabsi ku yimid macallimiinta maaddooyinka dugsiyada qaarkood
La daabacay fredag 16 augusti 2013 kl 09.52
Waxaa dugsiyada dalka aad looga la’ yahay macallimiin dhigta maaddooyinka qaarkood. Taasina waxay keeni kartaa in gebi ahaanba la waayo macallimiin dhigta maaddooyinka ay ka mid yihiin biyoolijiga, fiisiska, kimisteriga iyo weliba af-jarmalka. Macallimiin-la’aantaasna waxaa ka digey Ururweynaha macallimiinta, sida lagu soo qoray wargeyska Dagens Nyheter.
Isla markaasna waxaa dhici karta in ardayda barata macallinimada ay shaqala’aan noqdaan marka ay waxbarashada dhammaystaan maadaama ay badankood doortaan maaddooyinka af-ingiriisiga iyo taariikhda.
Tirakoob uu soo bandhigay ururweynaha macallimiintu waxaa lagu muujiyey in hal arday keli ah uu doorto maaddooyinka af-jarmalka, kimisteriga iyo farsamada gacanta, halka ay lixdan arday ka doortaan maaddada af-ingiriisiga ama taariikhda.
Ururweynaha macallimiinta ayaa welwel weyn ka muujiyey sida xaaladda barashada maaddooyinka qaarkood ku socoto, iyo in dadka badan oo waqtiyada soo socda geli doona hawlgab ay keeni karto khatar ah in maaddooyinka qaarkood loo waayo macallimiintii dhigi lahayd.